Kuthathwe iminyaka eyishumi ukwakhiwa kwewebhu okuphendulayo (RWD) ukusabalala kusukela lapho UCameron Adams uqale ukwethulwa umqondo. Umbono wawubuhlakani - kungani singenakukwazi ukuklama amasayithi avumelana nembobo yokubuka yedivayisi ebukwa kuyo?
Ngamanye amagama, izinto ezinjengezithombe zingalungiswa kanye nokuhlelwa kwalezo zinto. Nayi ividiyo echaza ukuthi uyini umklamo ophendulayo nokuthi kungani inkampani yakho kufanele iwusebenzise. Sisanda kuvuselela kabusha i- Highbridge isayithi ukuthi liphendule futhi manje selisebenza Martech Zone ukwenza okufanayo!
Uma ungathanda ukubona isiza esiphendulayo sisebenza, khomba eyakho i-Google Chrome browser (ngikholwa ukuthi iFirefox inesici esifanayo) ku Highbridge. Manje khetha Buka> Unjiniyela> Amathuluzi Wonjiniyela kusuka kumenyu. Lokhu kuzolayisha inqwaba yamathuluzi ezansi kwesiphequluli. Chofoza kusithonjana esincane seselula ngakwesokunxele kakhulu kubha yemenyu yamathuluzi wonjiniyela.
Ungasebenzisa izinketho zokuzulazula phezulu ukuze ushintshe ukubuka kusuka ekubukekeni kwezwe kuye ekumeni ngobude, noma ukhethe noma iyiphi inombolo yosayizi bendawo yokubuka ehlelwe kusengaphambili. Kungadingeka ukuthi uphinde ulayishe ikhasi, kepha yilona thuluzi elipholile kunawo wonke emhlabeni lokuqinisekisa izilungiselelo zakho zokuphendula nokuqinisekisa ukuthi isayithi lakho libukeka lilihle kuwo wonke amadivayisi!